Uber waxay horey u laheyd astaan ​​cusub sida ku dhacdo Uber Eats | Abuurista khadka tooska ah
El cusub Uber iyo Uber Eats logo waa halkan, si xitaa awood ugu yeeshaan inay ku dhex arkaan barnaamijyada ay u hayaan macruufka iyo Android. Xitaa waxay u qaateen "la qabsiga", oo ah isbeddel ku yimid nashqadeynta moobiilka oo maamusha soo koobidda astaamaha.
Uber waxay soosaartay astaan ​​cusub iyadoo diirada la saarayo fudeydka oo leh culeys yar isha. Si kale haddii loo dhigo, waraaqaha sumadda Mareykanku way ka sii cad yihiin oo waxay u taagan yihiin dhaqdhaqaaqa ay sumaddani ka kooban tahay marka laga hadlayo adeegga darawalnimada iyo gaarsiinta cuntada.
Uber hadda waxay ka shaqeysaa 660 magaalo oo adduunka ah. Fikradda dib u qaabeynta astaantaan ayaa ah mid metelaya, waxa ay ugu yeeraan summad caalami ah halkaas oo kooxuhu ay u dhaqaaqayaan dhulka si ay u awoodaan inay helaan waxyaabaha ku habboon, xaaladdan waxay noqon doontaa rakaabka, dhagaystayaashooda.
Had iyo jeer waa inaad ka bilowdaa saldhigga dhiirrigelinta ee waxa summaddu tahay. Kuwaas oo kala ah himilooyinkooda, fikradahooda, diiradooda, halka ay ka yimaadeen iyo halka ay u socdaan. Iskuday inaad ku matasho erayo taxane ah waxa ay shirkadu micnaheedu tahay halkaasna ka bilow inaad ku muujiso naqshadaada.
La Uber isbeddelkeeda u gaarka ah jihooyinka kale, sida Uber Eats, waxay ka tarjumaysaa isbeddelka lagu sameeyay astaanta cusub; taasi ma ahan mid ka fog kii hore. Laakiin waxay caddaynaysaa wax kasta oo laga sheegay ee ku saabsan sumadda iyo shirkadda ku jirta kicinta qaybo badan oo meeraha ah.
Sidoo kale marinta qorista waxay qaadataa shibbaneyaal badan loo isticmaali jiray in lagu muujiyo in aysan qaadanaynin nashqado qariib ah ama nuujooyin la xoojiyay si loo siiyo isbeddel ka tarjumaya waxa shirkaddu lafteeda tahay. Noocaas 'Uber typography' wuxuu si fiican uga tarjumayaa himilooyinka iyo halka shirkaddan ku saleysan barnaamijyada moobiilka ay ku socoto.
Waxay ahayd isla Evernote midka isbadal kale ku sameeyay astaantiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Uber iyo Uber Eats waxay bilaabeen astaan ​​cusub
NU-ga cajiibka ah: RO watch wuxuu kaa dhigi doonaa inaad dib uga fikirto inaad mar labaad gacantaada ku xirto
Pinterest wuxuu gaaraa 250 milyan oo isticmaale firfircoon bishii